12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ
ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရှေးခေတ် ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ကျောက်တွေ ရှိရင် ပြောတတ်တယ်။, ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း ပြောကြမယ်။, ကျူးကျော်မှုများ, ယဉ်ကျေးမှုများ, အချစ်. အဆိုပါ 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်း အများစုသည် အလှအပနှင့် ရုပ်ထုများကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။. အီဂျစ်ရှိ ဖာရောဘုရင်၏ ဘုရားကျောင်းများမှ အရှေ့တောင် အာရှရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများအထိ, ဤရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများသည် သမိုင်းဝင်ကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။.
1. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: Knossos နန်းတော်
ကြေးခေတ် နိုင်ငံရေးဘဝ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သော ဝတ်ပြုရာနေရာ, Knossos နန်းတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. Knossos ဘုရားကျောင်းသည် Crete ရှိ Minoan ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟိုဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းမွန်ဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော ဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ပထမဆုံး Knossos ဘုရားကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1900 ဘီစီက တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာ, သို့သော် ကရေတေတွင် ငလျင်အများအပြား လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။. သို့သျောလညျး, မီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီး မကြာခင်မှာပဲ နောက်ထပ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခု ဆောက်ပြီး ပျက်စီးသွားတယ်။. ထို့ကြောင့်, ယနေ့ တည်ရှိနေသော Knossos ဘုရားကျောင်းသည် 3တတိယအကြိမ်မြောက် ဗိမာန်တော်မှ 1375 ဘီစီ. Knossos ဘုရားကျောင်းသည် ဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းသမိုင်းဝင်နေရာများ ဒဏ္ဍာရီတွေ နဲ့ ဘုရားတွေ ၊.
Stonehenge ကို ကြိုစားနေသည် 6,000 နှစ်ပေါင်း, တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ Gobekli ကျောက်တုံးများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးသော ဘုရားကျောင်း၏ ရုပ်ကြွင်းများဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။. အဆိုပါ 11,000 နှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှိသော Gobekli Tepe ကျောက်တုံးများသည် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ကိုးကွယ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
သို့သျောလညျး, ဒေသအတွင်း လူသားအခြေချနေထိုင်မှု တွေ့ရှိချက် မရှိပါ။, သို့သော် ထိုနေရာသည် ခြေသလုံးသား မုဆိုးများနှင့် စုဆောင်းသူများ၏ ခရီးအတွက် အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဒါကြောင့်, Gobekli Tepe ဘုရားကျောင်းသည် သန့်ရှင်းရာဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။, ဘာသာရေးအဓိပါယ်နှင့်.
3. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: ဟာဂရကင်
တစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်။ 20 အလယ်ဗဟိုတွင် megalith ကျောက်တုံးများ, Hagar Qim ဘုရားကျောင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့်, Hagar Qim သည် Maltese Prehistoric မှ ပုံမှန်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။.
Hagar Qim ဗိမာန်တော်ရှိ အထူးခြားဆုံးသော အင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုသည် အခန်းနှစ်ခန်းထဲမှ တစ်ခုတွင် ဘဲဥပုံအပေါက်ဖြစ်သည်။. နွေရာသီ၏ပထမနေ့တွင်, နေ၏ရောင်ခြည်များသည် ဤတွင်းကိုဖြတ်၍ ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို လင်းထိန်စေသည်။. မင်းရဲ့ Malta ခရီးစဉ်မှာ Hagar Qim ကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။, တယောက်ကို လေးစားတယ်။ 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ဘုရားကျောင်းများ.
4. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: Seti ဘုရားကျောင်း
အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။, Seti ဘုရားကျောင်းသည် ဆယ့်ကိုးမင်းဆက်မှဖြစ်သည်။. Seti ဘုရားကျောင်းသည် Seti နှင့်သူ၏သား Ramses II ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။. ဖခင်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။, သားဖြစ်သူသည် အလှဆင်ခြင်းနှင့် တံတိုင်းများ ပြီးသွားသောအခါ၊.
ယနေ့တွင်, Seti ဘုရားကျောင်းကို သွားလည်လို့ရပါတယ်။, အပေါ် တစ်နေ့တာခရီးစဉ် Cairo မှ. ဘုရားကျောင်းနံရံများပေါ်တွင် Abydos ဂရပ်ဖစ်တီကိုသင်အာရုံစိုက်သင့်သည်။.
5. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: Hypogeum ဘုရားကျောင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး မြေအောက်ဘုရားကျောင်းသည် Malta ရှိ Hypogeum ၏ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။. ထူးထူးခြားခြား ဗိမာန်တော် 6,000 အသက်အနှစ်,3အဆင့်ဆင့်သော ဘုံဗိမာန်များ.
Hypogeum ဗိမာန်တော်သည် ရှေးဦးစွာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာနေရာဖြစ်သည်။, သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းကို သင်္ချိုင်းနေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။. ဧည့်သည်များသည် နံရံပေါ်ရှိ အနီရောင် ပန်းချီကားများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။, မောလ်တီကျွန်းများရှိ တစ်ခုတည်းသော သမိုင်းမတင်မီ ပန်းချီကားများ. ဖြည့်စွက်ကာ, Valletta ပြတိုက်ရှိ ဗိမာန်တော်တွင် တွေ့ရှိရသည့် အထူးရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။.
6. Luxor ဘုရားကျောင်း
Luxor ဘုရားကျောင်းရဲ့ အခန်းတွေကို ဖြတ်လျှောက်ရင်းနဲ့, နှစ်ရာပေါင်းများစွာ သမိုင်းကြောင်းကို သင်ပြန်သွားပါ။. ခြေလှမ်းတိုင်းက မင်းကို Ramses II ရဲ့ ခေတ်ကို ပြန်ပို့တယ်။, ရှေးအီဂျစ်၏ဘာသာရေးဘဝနှင့်.
Luxor ဘုရားကျောင်းသည် ရှေးခေတ်အီဂျစ်ဘာသာတရားတွင် ကြီးမားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။. ထို့အပြင်, ဖာရောဘုရင်၏ နှစ်စဉ်နန်းတက်ပွဲအတွင်း ဘုရားသခင် Amon သည် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို ခံစားခဲ့ရသော Luxor ဗိမာန်တော်တွင်ဖြစ်သည်။.
7. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: စတုန်းဟင်ဂ်
ဧရာမကျောက်တုံးကြီးသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. Stonehenge သည် Wiltshire တွင် ဂုဏ်ယူနေပါသည်။, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ. ၎င်းသည် ရာနှင့်ချီသော ဧည့်သည်များကို သဘောကျစေရန် ဆွဲဆောင်သည်။. သမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနလောကမှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ဒရူဒစ်များသည် Stonehenge ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။.
Stonehenge သည် သမိုင်းမတင်မီအချိန်များတွင် ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။. နိမိတ်လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ကျောက်တုံးများ စီစဥ်ထားပြီး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံသည် နေထွက်ချိန်ကို မျက်နှာမူသည့် အချက်ဖြစ်သည်။. ဤကျောက်တုံးကြီးကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ဤတိကျသောနေရာသို့ မည်သို့ယူဆောင်လာသည်ကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။, Stonehenge သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ရေပန်းအစားဆုံး ဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။.
8. Ggantija ဘုရားကျောင်းများ
မော်လ်တာရှိ ရှေးဟောင်း Ggantija သည် ထင်ရှားသည်။ 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ. ဤသည်မှာ ဘုရားကျောင်း နှစ်ခု ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်, Ggantija ကြီးမားသော ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ဘုရားကျောင်းများသည် ၎င်းတို့၏ အမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။.
ထို့အပြင်, ထို့အပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှေးအကျဆုံး ကျောက်စာတိုင်ကို ဖြတ်လျှောက်သွားနိုင်သည်။.
9. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: Amada ဘုရားကျောင်း
အီဂျစ်ဘုရားကျောင်းများသည် ၎င်းတို့၏ သပ်ရပ်သောအရွယ်အစားကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျော်ကြားသည်။, နှင့်ဒီဇိုင်း. အီဂျစ်ရှိဘုရားကျောင်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံးဘုရားကျောင်းများအဖြစ် လူသိများသည်။. နံရံများပေါ်တွင် စာလုံးပုံများ နှင့် ထွင်းထုမှုများကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။, Amada ဘုရားကျောင်းသည် အလှတရားတွင် ခြွင်းချက်မရှိပါ။.
အငယ်, အထင်ကြီးလောက်စရာ Amada ဘုရားကျောင်း နံရံများတွင် လက်ရာမြောက်သော ထွင်းထုမှုများရှိသည်။. ကမ္ပည်းစာများသည် အီဂျစ်၏ Lybian ကျူးကျော်မှုကဲ့သို့ အီဂျစ်သမိုင်းတွင် အရေးပါသော အဖြစ်အပျက်များကို မျှဝေထားသည်။. ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည် Lake Nasser ၏ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်းများသို့သွားရောက်လည်ပတ်လိုပါက, သင်၏အိတ်များကိုထုပ်ပိုးပြီး Nubia သို့သွားပါ။.
10. Mundeshwari Devi ဘုရားကျောင်း, ဘီဟာ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း, Mundeshwari ဘုရားကျောင်းသည် Kaimur တွင်ရှိသည်။. သေးငယ်သည်။, ဒါပေမယ့် ကျောက်ထွင်းလက်ရာတွေမှာ အထင်ကြီးစရာပါ။, ဗိမာန်တော်သည် Lord Shiva နှင့် Shakti ၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။. Mundeshwari ဘုရားကျောင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် Gupta ခေတ်မှ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ထွင်းထုမှုများနှင့် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ 625 ဘီစီ.
လှပသောဘုရားကျောင်းသည် Mundeshwari တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။, အခြားထင်ရှားသော အမွေအနှစ်များစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။. စွဲလန်းနေရင် ဟိန္ဒူဘာသာ၏သမိုင်းနှင့်, Mundeshwari ဘုရားကျောင်းကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။. အထူးနေရာတစ်ခုတွင် အတူတကွနေထိုင်သော Lord Shiva နှင့် Shakti ၏သင်္ကေတအကြောင်း သင်ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။.
11. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ: Borobudur အင်ဒိုနီးရှား
အင်ဒိုနီးရှားရှိ Borobudur ဘုရားကျောင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။. ယနေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများအပြားသည် ဂျာဗားကျွန်းရှိ Borobudur ဘုရားကျောင်းသို့ ဘုရားဖူးလာရောက်ကြသည်။.
Borobudur ဘုရားကျောင်းကို သွားလည်တဲ့အခါ, မင်းမြင်ရတာ အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။ 56,000 ဤဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကိုဖွဲ့စည်းသည့် မီးခိုးရောင် ကုဗမီတာ ကျောက်တုံးများ.
Freiburg ရထားမှ Offenburg
Leipzig Freiburg မှရထား
Nuremberg Freiburg မှရထား
12. Hatshepsut ဘုရားကျောင်း
Holy of Holies, Hatshepsut ဘုရားကျောင်းသည် 18 ရာစုမှဖြစ်သည်။. ဖာရောဟတ်ရှပ်ဆက်သည် ဘုရားကျောင်းကို Deir El-Bahri ၏ချောက်ကမ်းပါးများတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။, ထို့ကြောင့် ဘုရားကျောင်းမျက်နှာစာသည် ချောက်ကမ်းပါးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။’ ရှုခင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းသည် နိုင်ငံတော်သစ်ခေတ်မှဖြစ်သည်။, သို့သော် နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားကျောင်းသည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဗိမာန်တစ်ခုမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။. Deir El-Bahri လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ “မြောက်ဦးကျောင်းတိုက်”, ဗိမာန်တော် ဟတ်ရှပ်ဆုတ်၏ ခြံဝင်းအတွင်း၌ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုပင် ရှိသည်။.
မြူးနစ် Hallstatt မှရထား
Innsbruck ရှိ Hallstatt မှရထား
Hallstatt ရထားမှ Passau
Rosenheim Hallstatt မှရထား
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save သင်ဤခရီးများစီစဉ်ရန်ကူညီခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မည် 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို သင့်ဆိုက်တွင် “ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးအကျဆုံး ဘုရားကျောင်း 12 ခု” ကို ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, နှင့် /fr ကို /pl သို့မဟုတ် /de နှင့် အခြားဘာသာစကားများသို့ ပြောင်းနိုင်သည်။.
ရှေးက	ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းများ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးအကျဆုံးလက်ရာများ	ဘုရားကျောင်းများ